Fampitandremana ataon'ny polisy ao Garmin | Martech Zone
Fampitandremana ataon'ny polisy ao Garmin
Zoma, Septambra 1, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Ity ny hevitro miliara dolara ho an'ny andro!
Ahoana raha i Garmin (na ireo fitaovana fanaovana sarintany fiara hafa) natsangana tamin'ny mpamily laser / radar miaraka amin'ny bokotra hisamborana olona mitatitra ny toerana misy ny fandrika hafainganam-pandeha na polisy? Tamin'izany fomba izany, alohan'ny hahatongavako amin'ilay fandrika hafainganam-pandeha na fifamoivoizana voaambina, dia mampitandrina ahy ny fitaovana alohan'ny hahatongavako. Raha tsy raisin'ny laser / radar dia mbola misy olona afaka mitory azy amin'ny alàlan'ny bokotra. Mety ho amin'ny timer ny tatitra… dia miseho ihany raha voalaza ao anatin'ny ora iray.
Tsy mpandeha haingana aho, fa mahita tena mahazo tapakila 1 isaky ny 1 na 2 taona. Miaraka amin'ny firaketana an-tariby mitondra fiara tsara dia tsy miala sasatra mihitsy aho. Manelingelina ahy izany satria ny tapakila mandeha haingana dia tsy ny fampihenana ireo mpamily ratsy ary ny fiarovana sy ny fitadiavam-bola ho an'ny faritra. Tsy tokony ho tanjon'ny tapakila izany.
Vokatr'izany dia tiako ny fomba iray hisorohana azy ireo tanteraka. Raha afaka mividy fitaovana toy izao aho dia hataoko rahampitso!
The Long Tail: Sariitatra mahatsikaiky avy amin'ny gapingvoid.com